GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Haitian Creole Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Portuguese (European) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Vietnamese Zulu
Ka e were ya na gị na ụmụ agbọghọ abụọ gara ebe a na-ere nri n’ụlọ akwụkwọ unu iri nri ehihie, otu nwa okorobịa bịara ọhụrụ n’ụlọ akwụkwọ unu abata.
Otu n’ime ha asị gị: “Ị̀ ma na Emeka hụrụ gị n’anya? Ị̀ hụkwara ụdị anya ọ na-ele gị? Anya ya ekweghị apụ apụ n’ebe ị nọ!”
Nwa agbọghọ nke ọzọ abịakwuo nso, takwunyere gị, sị: “Ị̀ makwa na o nwebeghị enyi nwaanyị?”
Ị ma na ha kwuru eziokwu. A sị ka e kwuwe, Emeka kpọrọ gị n’ụbọchị gara aga ka ị bịa rie oriri n’ụlọ ya. Ma i kweghị aga, n’agbanyeghị na ọ gụrụ gị agụụ ịga za òkù ahụ.
Nwa agbọghọ mbụ ahụ agwa gị okwu ọzọ mgbe ị ka na-atụgharị uche.
Ya asị gị: “A sị na enweghị m enyi nwoke, o nweghị ihe gaara eme ka m ghara imeta Emeka enyi.”
Ya eju ya anya, ya ana-ele gị. Ị ma ihe ọ chọrọ ikwu.
Ya asị gị: “Bịadị, gịnị mere i nweghị enyi nwoke?”
Ị naghị achọ ka a jụọ gị ajụjụ ahụ! Nke bụ́ eziokwu bụ na ị chọrọ inwe enyi nwoke. Ma a gwara gị na ọ kacha mma ka i chere ruo mgbe i jikeere ịlụ di tupu gị na nwoke akpawa. A sị nnọọ na ọ bụghị . . .
Nwa agbọghọ nke ọzọ asị gị: “Ọ̀ kwa n’ihi chọọchị unu ahụ?”
Gị asị n’obi gị: ‘Olee otú o si mara ihe dị m n’obi?’
Ya achịa gị ọchị, sị: “Mgbe niile gị na Baịbụl! Gịnị mere na ị gaghị ahapụtụ Baịbụl kporitụkwanụ ndụ mgbe ụfọdụ?”
Ò NWETỤLA mgbe a chịrị gị ọchị n’ihi na ị na-agbalị ime ihe Baịbụl kwuru? Ya bụrụ otú ahụ, i nwere ike na-eche na e nwere uru ị na-anaghị erite n’ihi ime ihe Baịbụl kwuru. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Deborah chere otú ahụ. O kwuru, sị: “Amalitere m iche na iwu Baịbụl na-eke mmadụ agbụ. Otú ndị enyi m n’ụlọ akwụkwọ si na-eme ihe ọ bụla sọrọ ha masịrị m.”
Ihe Ga-eme Ka Anya Doo Gị
Ọ bụghị mgbe niile ka mmadụ ga-echere ka ihe mee ya tupu ya amụta ihe. N’eziokwu, Baịbụl kwuru na mmadụ kwesịrị ịmụta ihe n’ihe mere ndị ọzọ, otú ahụ ọbụ abụ bụ́ Esaf mere. O nwere mgbe Esaf chere na iwu Chineke na-eke mmadụ agbụ. Ma anya doro ya mgbe o leruru ndụ ndị hapụrụ ụzọ Chineke anya. Esaf mechara chọpụta na ha nọ “n’ala na-amị amị.”—Abụ Ọma 73:18.
Buru nke ahụ n’uche tụlee ihe ụfọdụ n’ime ndị na-eto eto ndị hapụtụrụ iwu Baịbụl gaa kwaa iko kwuru.
● Gịnị mebiri echiche gị na omume gị?
Deborah: “Mgbe m nọ n’ụlọ akwụkwọ, ahụrụ m na onye ọ bụla nwere enyi nwoke na enyi nwaanyị. O yikwara ka hà na-enwe obi ụtọ. Mụ na ha nọrọ, m na-ahụ ka ha na-esusu ọnụ, na-amakụkwa ibe ha. Ọ na-adị m ka m̀ bịara nke m iche, dịkwa m ka m bụrụ ha. M na-ejikarị ọtụtụ awa mụrụ anya na-arọ nrọ ebe mụ na otu nwa okorobịa ihe ya dị mụ mma na-enwe mmekọahụ. O mere ka ọ gụsikwuo m ike ka mụ na ya nwee mmekọahụ.”
Mike: “M na-agụbu akwụkwọ ndị na-ekwu na mmekọahụ bụ ndụ, na-elekwa ihe na-akwado ya na TV. Iso ndị enyi m na-akọ banyere mmekọahụ mere ka ọ na-agụsi m agụụ ike. Naanị mụ na nwa agbọghọ nọrọ, m na-eche na anyị nwere ike na-adịda ibe anyị aka n’enweghị mmekọahụ, na m nwere ike ịkwụsị mgbe ọ bụla m chọrọ.”
Andrew: “Ile foto ndị gba ọtọ n’Ịntanet riri m isi. M malitere ịṅụ oké mmanya. M na-esokwa ndị ntorobịa na-adịghị eme ihe Baịbụl kwuru aga oriri na nkwari.”
Tracy: “N’ime obi m, ama m na inwe mmekọahụ mgbe m na-alụbeghị di adịghị mma, ma, akpọghị m ya asị. Ebughị m n’obi ịmalite inwe mmekọahụ mgbe m na-alụbeghị di, ma ejidelighị m onwe m. Mgbe m malitere, akọnuche m anaghị ama m ikpe.”
● Ụdị ndụ ahụ i biri ò mere ka i nwee obi ụtọ?
Deborah: “Ná mmalite, obi dịrị m ezigbo mma na mụ enwerela onwe m. Obi tọkwara m ụtọ na ụmụ agbọghọ ibe m na-elezi m anya ọma. Ma obi ụtọ ahụ adịteghị aka. Onwe m sọwara m oyi, dịzie m ka onye gara mụọ ihe ọjọọ, na onye tọgbọ chakoo. Akwara m mmakwaara na abụkwaghị m nwa agbọghọ na-amaghị nwoke.”
Andrew: “O mere ka ọ dịkwuoro m mfe ime ihe ọjọọ ọ bụla batara m n’obi. Ma, obi m nọkwa na-ama m ikpe. Onwe m gwụkwara m ike.”
Tracy: “Ịkwa iko mebiri oge agbọghọbịa m. Echere m na mụ na enyi m nwoke ga na-ekpori ezigbo ndụ. Ma anyị ekporighị ndụ. Anyị kpataara ibe anyị mwute, obi ọjọọ, na obi mgbawa. Kwa abalị, m na-ebe ezigbo ákwá n’ihe ndina m, na-ekwu na a sị na m ma, m gaara eme ihe Jehova kwuru.”
Mike: “Ọ malitere ịdị m ka ò nwere ihe nwụrụ n’ime m. M gbalịrị ileghara nsogbu omume m na-enye ndị ọzọ anya, ma o kweghị m. O wutere m na m nọ na-eme ihe na-agbawa ndị ọzọ obi n’ihi ndụ m na-ekpori.”
● Olee ndụmọdụ ị ga-enye ndị ntorobịa ndị chere na iwu Baịbụl na-eke mmadụ agbụ?
Tracy: “Na-eme ihe Jehova kwuru, ka ndị enyi gị bụrụkwa ndị na-eme otú ahụ. Ọ ga-eme ka i nwekwuo obi ụtọ.”
Deborah: “Ọ bụghị naanị gị ka ihe ị na-eme gbasara. Ọ gbasara ndị ọzọ. Ọ bụrụ na i leghara ndụmọdụ Chineke anya, ị ga-emebi onwe gị.”
Andrew: “Mgbe ị na-amabeghị ihe, ị ga-eche na otú ụmụaka ibe gị si ebi ndụ na-atọgbu onwe ya. Ọ ga-eme ka ị mụta àgwà ha. N’ihi ya, kpachara anya ná ndị ị na-emeta enyi. Tụkwasị Jehova obi, ị gaghịkwa akwa mmakwaara.”
Mike: “Ụfọdụ n’ime akụ̀ kacha akụ̀ Jehova nyere gị bụ ùgwù gị na ịbụ onye na-amaghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Ọ bụrụ na ị tụfuo onyinye ndị ahụ n’ihi na i jidelighị onwe gị, i reela ùgwù gị. Gwa papa gị na mama gị nakwa ndị ọzọ tozuru okè nsogbu gị. I mejọọ ihe, gwa ha ozugbo ma mezie ya. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe Jehova kwuru, obi ga-eru gị ala.”
Iwu Baịbụl Ọ̀ Na-eke Mmadụ Agbụ, ka Ọ̀ Na-echebe Mmadụ?
Jehova bụ ‘Chineke obi ụtọ,’ ọ chọkwara ka ị na-enwe obi ụtọ. (1 Timoti 1:11; Ekliziastis 11:9) E dere iwu ndị dị na Baịbụl ka ha baara gị uru. N’ezie, i nwere ike iche na ha kere gị agbụ n’ekweghị gị megharịa ahụ́. Ma n’eziokwu, iwu Baịbụl na-echebe gị ka ị ghara imerụ ahụ́, otú ahụ belt oche ụgbọala na-echebe mmadụ.
N’eziokwu, Baịbụl bụ akwụkwọ ị ga-atụkwasị obi. Ọ bụrụ na i kpebie ime ihe o kwuru, ọ bụghị naanị na ị ga-eme ka obi dị Jehova ụtọ, kamakwa, ọ ga-abara gị uru.—Aịzaya 48:17.
I nwere ike ịbụ enyi Chineke. Chọpụta otú ị ga-esi abụ ya.
“Mụ onwe m, Jehova, bụ Chineke gị, Onye na-akụziri gị otú ị ga-esi baara onwe gị uru.”—Aịzaya 48:17.
Chee echiche otú ị ga-esi gosi nwanne gị ị tọrọ na amamihe dị n’iwu Baịbụl. Ịgwa ndị mmadụ ihe i kweere bụ otu ụzọ bara uru ị ga-esi mee ka ọ gbanye mgbọrọgwụ n’obi gị.
Imebi adịm ná mma gị na Jehova anaghị egbu oge, ma imezi ya nwere ike iwe gị ọtụtụ afọ.
Ihe m ga-eme nke ga-enyere m aka ịghọta amamihe dị n’iwu Baịbụl bụ ․․․․․
Ọ bụrụ na ọ dịwa m ka m bụrụ ndị na-ebi ndụ ndị ụwa, ihe m ga-eme bụ ․․․․․
● A bịa ná nsogbu imebi iwu Chineke na-akpata, gịnị mere mmadụ ichere ka ihe mee ya abụghị ụzọ kacha mma ọ ga-esi amụta ihe?
● Gịnị ka ị mụtara n’ihe Deborah, Mike, Andrew, na Tracy kwuru?
● Gịnị nwere ike ime ka ụfọdụ ndị chee na iwu Baịbụl na-eke mmadụ agbụ, ma gịnị mere ụdị echiche ahụ abaghị uru?
[Ihe odide gbatụrụ okpotokpo nke dị na peeji nke 285]
“Obi erughị ala mmadụ na-enwe mgbe ọ na-agbalị izochi ihe ọjọọ o mere na-aka mwute ọ ga-enwe mgbe a dọrọ ya aka ná ntị njọ.”—Donna
[Foto dị na peeji nke 288]
Iwu Baịbụl anaghị eme ka ị ghara inwe obi ụtọ; ọ na-echebe gị
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Mere M Ga-eji Na-eme Ihe Baịbụl Kwuru?
yp2 isi 34 p. 282-288